‘भरिया भएकैले एभरेष्ट म्याराथन जिते’
अन्तर्वार्ता/विचार सोमबार, जेठ २०, २०७६
१२ देशका करीब १०० प्रतिस्पर्धीलाई उछिनेर हिमाल एक्सपिडिसनद्धारा आयोजित यस वर्षको ‘एभरेष्ट म्याराथन’ उपाधि जितेका सुमन कुलुङ (२८) भन्छन्, “उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने प्रतियोगिता जोखिमपूर्ण छन्।”
एभरेष्ट म्याराथनको उपाधि जित्नु भयो, कस्तो लागिरहेछ ?
यो विश्वकै अग्लो ठाउँमा हुने प्रतियोगिता हो । सन् २००३ देखि संचालन हुँदै आएको प्रतियोगितामा यसपालि १२ देशका झण्डै १०० प्रतियोगी सहभागी थिए । त्यति धेरै प्रतिस्पर्धीलाई उछिनेर विश्वभर चर्चा पाउने प्रतियोगिता जित्दा खुशी नहुने कुरै भएन ।
प्रतियोगिता अघि उपाधि जित्छु जस्तो लागेको थियो ?
उपाधि जित्ने लक्ष्य जसको पनि हुन्छ । सगरमाथा आधारशिविरदेखि नाम्चेसम्मको ४२.१९५ किलोमिटर दूरी ३ घण्टा ४७ मिनेट १६ सेकेण्डमा पार गरेर मैले उपाधि जितें । तर, यसपालि उपाधि नै जित्छु जस्तो चाहिं लागेको थिएन । दोस्रो या तेस्रोसम्म भइएला भन्ने चाहिं थियो ।
म्याराथनमा चाहिं कसरी जोडिनु भयो ?
म सगरमाथा आधारशिविरमा भरियाका रुपमा काम गर्छु। उकालो–ओरालो छिटो हिंड्न सक्ने भएकाले स्थानीयस्तरमा आयोजना हुने दौड प्रतियोगितामा भाग लिन्थें। ती प्रतियोगिता जितेपछि जिल्ला बाहिरका प्रतियोगितामा पनि भाग लिन थालें। त्यसपछि क्रमशः राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामै जोडिन पुगें।
नेपाल बाहिर भएका कुनै म्याराथन प्रतियोगितामा सहभागी हुनुभएको छ ?
चीन र हङकङमा आयोजित प्रतियोगितामा भाग लिएको छु । त्यसका लागि तीन पटक चीन र ६ पटक हङकङ पुगें । त्यहाँ भएका प्रतियोगितामा दोस्रो स्थानसम्म आएँ । नेपालमा चाहिं कान्तिपुर म्याराथन बाहेक सबै प्रतियोगितामा भाग लिएको छु ।
हिमाली क्षेत्रमा र अन्यत्र हुने प्रतियोगितामा के फरक रहेछ ?
हिमाली क्षेत्रमा सधैं ‘हाई–अल्टिच्युड’ को जोखिम हुन्छ । त्यही भएर हिंड्दा–दौड्दा पनि विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ । प्रतियोगिता अघि र पछिका आनीबानीमा पनि विचार गर्नुपर्छ । उच्च हिमाली क्षेत्रका प्रतियोगितामा सधैं जोखिम बढी हुन्छ । तराई र पहाडमा भने त्यस्तो हुँदैन ।